ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 21°58′0″N 96°5′0″E﻿ / ﻿21.96667°N 96.08333°E﻿ / 21.96667; 96.08333ကိုဩဒိနိတ်: 21°58′0″N 96°5′0″E﻿ / ﻿21.96667°N 96.08333°E﻿ / 21.96667; 96.08333
ချမ်းအေးသာစံ မြို့နယ် (Chanayetharzan Township) သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ မန္တလေးမြို့လယ်တွင် တည်ရှိသော မြို့နယ်ဖြစ်သည်။ မြောက်ဘက်တွင် အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ အရှေ့ဘက်တွင် ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ တောင်ဘက်တွင် မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ အနောက်ဘက်တွင် ဧရာဝတီမြစ် တို့နှင့် ဝန်းရံထားသည်။ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်သည် မန္တလေးမြို့၏ စီးပွားရေးအချက်အချာကျသော နယ်မြေလည်းဖြစ်သည်။ မြို့၏ အဓိက ဈေးချိုတော် နှင့် တခြား ဟိုတယ်များစွာလည်း တည်ရှိသည်။ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၏ စာရင်းအရ ၂၀၁၈ခုနှစ် မတ်လကုန် လူဦးရေ ၁၄၈,၇၉၂ ရှိသည်။
၈.၁.၁ ထင်ရှားသည့် ဘုရား၊ စေတီနှင့် ပုထိုးများ
၈.၁.၂ သမိုင်းဝင်ထင်ရှားသည့် အဆောက်အဦနှင့်နေရာများ
၁၉၆၅ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ၁ရက်နေ့တွင် တော်လှန်ရေးအစိုးရက မန္တလေးမြို့ကို အရှေ့တောင်မြို့နယ်၊ အရှေ့မြောက်မြို့နယ်၊ အနောက်တောင်မြို့နယ်၊ အနောက်မြောက်မြို့နယ်အဖြစ် သတ်မှတ်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က လက်ရှိ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်သည် အရှေ့မြောက်မြို့နယ်တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်ငြိပ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ၁၀.၁၂.၁၉၉၂ တွင် မန္တလေး လေးမြို့နယ်အား ငါးမြို့နယ်အဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်ကို ရပ်ကွက် ၂၀ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
မြောက်လတ္တီတွဒ် ၂၀.၀၅၇ဒီဂရီ ၅၆မိနစ်နှင့် ၂၁ဒီဂရီ၅၉မိနစ်အကြား၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆.၀၃ဒီဂရီ၃မိနစ်နှင့် ၁၉၆.၀၈ဒီဂရီ ၃မိနစ်အကြားတွင်တည်ရှိသည်။ အရှေ့မှအနောက်သို့ ၅.၈၅မိုင်၊တောင်မှမြောက်သို့ ၀.၉၂မိုင်ရှည်လျားကာ ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅.၀၄မိုင် ကျယ်ဝန်းပါသည်။
ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၏ အရှေ့ဘက်တွင် ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ တောင်ဘက်တွင် မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ အနောက်ဘက်တွင် ဧရာဝတီမြစ်ခြားကာ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ မြောက်ဘက်တွင် အောင်မြေသာစံမြို့နယ် တို့တည်ရှိသည်။
ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် အနိမ့်ဆုံးနေရာတွင် ၂၅၀ပေနှင့် အမြင့်ဆုံးနေရာတွင် ၂၅၆ပေရှိသည်။ မြို့နယ်၏ အနောက်ဘက်တွင် ဧရာဝတီမြစ်က မြောက်မှ တောင်သို့ စီးဆင်းနေသည်။
မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၏ စာရင်းအရ ၂၀၁၈ခုနှစ် မတ်လကုန် လူဦးရေ ၁၄၈,၇၉၂ ရှိသည်။
ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်တွင်နေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများတွင် ဗမာလူမျိုးများ အများဆုံးနေထိုင်ကြသည်။ ထို့နောက် ရှမ်း၊ကချင်၊ချင်း၊ကရင်၊ရခိုင်၊မွန်၊ကယား လူမျိုးများ အစဉ်လိုက်များပြားစွာနေကြသည်။ ကိုးကွယ်မှုအနေဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကို အများဆုံး ကိုးကွယ်ကာ အစ္စလာမ်၊ဟိန္ဒူ၊ခရစ်ယာန်နှင့် အခြားကိုးကွယ်သူဦးရေမှာ အစဉ်လိုက်များပြားသည်။ မြို့နယ်လူဦးရေ၏ ၆.၈၆%မှာ အခြားသော နိုင်ငံခြားလူမျိုးနွယ်ဝင်များဖြစ်သည့် တရုတ်၊အိန္ဒိယ၊ပါကစ္စတန် စသည့်လူမျိုးများဖြစ်သည်။ ၂၀၁၉ခုနှစ်အထိ ကျား၊ မ အချိုးမှာ (၁ : ၁.၂) ဖြစ်သည်။
ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်မှာ မန္တလေးမြို့၏ မြို့လယ်ခေါင်ကျသော မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးသော မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းမှ ကုန်ပစ္စည်းများကို လက်လီလက်ကားဖြန့်ဖြူးသော ဈေးချိုတော်နှင့် အခြားဈေးကြီးများ ဤမြို့နယ်တွင် တည်ရှိ၍ စီးပွားရေးအချက်အချာကျလှသည်။
မြန်မာ့မီးရထား၏ ဒီဇယ်စက်ခေါင်းပြင်စက်ရုံ၊ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ သင်္ဘောပြင်စက်ရုံတို့ရှိသည်။ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ခေါက်ဆွဲစက်၊သကြားစက်၊ဆီစက်၊သစ်စက်၊ဂျုံစက်၊ရေခဲစက် ၈၀ကျော်နှင့် အိမ်တွင်းစက်မှုလုပ်ငန်း ၈၀ကျော်တို့ တည်ရှိသည်။
မရမ်းခြံဆိပ်ကမ်းနှင့် မင်းကွန်းသို့သွားရန် မင်းကွန်းဆိပ်ကမ်းဟူ၍ သင်္ဘောဆိပ်၂ခုရှိသည်။ အထက်မြန်မာပြည်၏ အချက်အချာကျသောဘူတာရုံကြီးဖြစ်သည့် မန္တလေးဘူတာကြီးမှာ မြို့နယ်၏ တောင်နှင့်မြောက်အကျယ် ၀.၉၂မိုင်အတိုင်း ၂၆ဘီလမ်းမှ ၃၅အေလမ်းအထိ တည်ရှိသည်။ မန္တလေး-ကျောက်ဆည်ပြေးဆွဲသော ယာဉ်လိုင်းငယ်များစွာတွေ့နိုင်သည်။
အလက (ထ(ခွဲ)) ၂၇
ဘက ၁ − ၆၂လမ်း၊ ၂၇−၂၈လမ်းကြား
ဘက ၂ − ၃၁−၆၂လမ်းထောင့်
ဘက ၃ − လမ်း ၉၀၊ ၂၈−၂၉လမ်းကြား
ဘက ၄ − လမ်း ၉၀၊ ၃၄-၃၅လမ်းကြား
ဘက ၅ − ၈၉လမ်း၊ ၃၄-၃၅လမ်းကြား
ဘက ၆ − လမ်း ၉၀၊ ၃၂-၃၃လမ်းကြား
ထင်ရှားသည့် ဘုရား၊ စေတီနှင့် ပုထိုးများ[ပြင်ဆင်ရန်]
↑ ၁.၀ ၁.၁ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံး။ 28 October 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
မန္တလေးခရိုင်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက် Archived 1 February 2021 at the Wayback Machine. − အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
http://www.emandalay.gov.mm Archived 24 February 2020 at the Wayback Machine.
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ Archived 29 January 2020 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်&oldid=726234" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၃:၀၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။